XOG SHIILAN: ”Somalia maanta Maraykanka waa uga muhiimsan tahay Itoobiya!” – Maxaa mar qura soo kabiixaya Maraykanka? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka XOG SHIILAN: ”Somalia maanta Maraykanka waa uga muhiimsan tahay Itoobiya!” – Maxaa...
XOG SHIILAN: ”Somalia maanta Maraykanka waa uga muhiimsan tahay Itoobiya!” – Maxaa mar qura soo kabiixaya Maraykanka?
(Hadalsame) 15 Juun 2020 – Maraykanka ayaa markii ugu horreeysey si toos ah ugu lug yeeshay shir ay ku wada hadlayaan Soomaalidu, isagoo awal daaha gadaashiisa wax ka hagi jirey, haddaba maxaa soo dedejiyey inuu Maraykanku markan isa soo mutaxo?
Tafaasiirtu waa badan tahay, balse sida aannu kasoo xiganney ilo wargal ah oo ku dhow dhow wadahadalka iminka cirka sare mar qura loo qaaday ee DF Somalia & Somaliland, waxaa riixaya arrimo dhaqaale iyo kuwo istaraatijiyadeed oo laga leeyahay dalka Somalia oo ah dal weli bikro ah marka dhinac kasta laga eego.
”Somalia maanta Maraykanka waa uga muhiimsan tahay Itoobiya waayo Somalila waxaa taalla fursado aanay ku yaboohi karin Itoobiya. Waxaa halkan ku jira macaadiin fara badan sida Uranium, waxaa ku jira shidaal saliid iyo gaasba leh. Waxaa dheer laba badood oo barwaaqo ah inta badanna dihan,” ayuu Hadalsame u sheegay xubin ka mid ah Guddiga wadahadallada.
Waxaa kale oo intaa dheer, inuu durba bilowday Dagaal Qaboow oo u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha oo iminka Jabuuti wada fadhiya, il qooreedkana ka eegaya Somalia oo ah dal hodon ah oo ay dhulka dhigeen siyaasiyiin han iyo hiraal yar.
”Maraykanku wuxuu doonayaa laba arrimood; midi waa inay sharikaadkiisa oo 60-meeyadii sahmiyey shidaalka Somalia, balse fahmi waayey siyaasadda madax falluuqa ku dhisan ee Soomaalidu uu doonayo inuu shidaalkaa soo saaro. Midda kale, waa Somalia oo ah dal leh istaraatijiyad dhaqaale iyo mid juqraafi aan la quuri karin.” ayuu daba dhigay xog-ogaalka u warramay Hadalsame Media oo sheegay inuu Maraykanku durba saldhigyo ku leeyahay koonfurta dalka, kuwa kalena ka dhisanayo woqooyiga, si uu uga soo dheereeyo Shiinaha.
Danjiraha Maraykanka u fadhiya Somalia, Donald Yamamoto, ayaa waraysi dheer oo uu siiyey hay’adda cilmi baarista ku sameeysa arrimaha argagixisada ee Combating Terrorism Center wuxuu beri dhowayd ka marqaati kacay arrintan, isaga oo sheegay in ”marka ay timaado hardanka nagala dhexeeya tartamayaal ay ka mid yihiin China iyo Russia, waxa ay diiradda saarayaan waxaa ka mid ah khayraadka Bariga Afrika. Maxaa yeelay haddii aad mustaqbalka eegto, kaydka ugu wayn ee macdan-dhuleedka naadirka ah iyo biraha culusi waxay ku jiraan Bariga Afrika. Telefoonnadiinna oo dhan, walxaha laga sameeyo hubka heerka sare oo dhan waxaa la helaa Afrika, gaar ahaan Bariga Afrika.
”Gaar ahaan Somalia, waxa aan doonaynaa inaan xasilinno si aysan u noqonin xarun argagixiso ama meel soo saarta qaxooti caalami ah, annagoo quwadaha waawayn u sheegayna inaysan khayraadka ka dhamaysan ama ka wada dhuuqin qaarada, waayo ujeedkoodu waa inaan Afrikaanku khayraadkooda in badan ka faa’iidaysan.” ayuu Yamamoto oo wax badan kashifay qaarna siyaasadeeynaya kusoo koobay jawaabta.
”Waxaan marka bedelney qaabkii aannu u wajahayney, waxaan u tagnay MW [Somalia] waxaana ku niri, “ma doonayno inaan askar Maraykan soo dirno habeen kasta. Waxaan doonaynaa ciidamo Soomaaliyeed.” Waana taas sababta aannu u bilownay howlgal wadajir ah midkii abid ugu horreeyey oo aannu la sameeynayno ciidamada uu Maraykanku tababaray ee Danab oo ah unugyo xirfadleey ah. QM, UK, Midowga Yurub, Turkiga, Qadar iyo Imaaraadka ayaa iyaguna ciidamo tababaray oo shaqo fiican qabtay.
Previous articleMaxaa keenay in uu Turkigu ka maqnaado kulanka Jabuuti? (Xog rasmi ah & Maraykanka oo….)
Next articleSHIRKA JABUUTI: Maxaa ka jira in laga wada hadlay nooca NIDAAMKA la qaadanayo & inuu shirku iska yahay mid caato ah?!